किन चल्न छाडे चलचित्र ? « THULOPARDA.COM
यस वर्षको बैशाखदेखि मंसिर तेस्रो सातासम्म ५० बढी चलचित्र प्रदर्शनमा आइसकेका छन् । त्यसमध्ये ‘दाल भात तरकारी’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘कबड्डी ३’ र ‘छ माया छपक्कै’ ले मात्र नाफाको व्यापार गरे । बाँकी कुनै चलचित्रले हलमा दर्शक तान्न सकेनन् । यस वर्ष निकै आश गरिएका चलचित्रमध्ये ‘वीर विक्रम २’, ‘रातो टीका निधारमा’, ‘हजार जुनीसम्म’, ‘मारुनी’, ‘जाइरा’, ‘पोइ पर्‍यो काले’, ‘घामड शेरे’, ‘चच हुई’, ‘माछा माछा’ ले बक्सअफिस तताउने ठूलो अपेक्षा थियो । तर, कुनै सफल भएनन् ।
अभिनेता दीपकराज गिरीले हालै फेसबुकमा एउटा व्यांग्यात्मक स्टाटस लेखेका थिए, ‘केटा केटीहरू । डेटिङका लागि सुनसान ठाँउ चाहिएको छ ? आजकल जुनसुकै चलचित्र हलमा गए पनि हुन्छ । हरिबिजोग डटकम ।’ उनको यो स्टाटसले पनि अहिले हलमा चलचित्र हेर्ने दर्शक नभएको प्रस्ट्याउँछ । कतिपय चलचित्रको व्यापार ठन्डाराम हुनुको कारण चिसो मौसमलाई माग्छन् ।
तर, हल सञ्चालक तथा वितरक गोपालकाजी कायस्थ अहिले चलचित्र चल्न छाड्नुको कारण चिसो मौसमलाई मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘चलचित्र राम्रो छ भने दर्शकलाई मौसमले हल जान रोक्दैन । गएको दुई हप्ता पछाडि बलिउड चलचित्र ‘दबंग ३’ आउँदैछ । त्यो चलचित्र हेर्न दर्शकलाई जाडोले रोक्दैन । अहिले कि स्टारडम भएका कलाकारको चलचित्र चल्छ कि त ठूला ब्यानरका ।’
उनी बुधबारबाट जडिबुटीमा रहेको पुष्पाञ्जली हल बन्द गर्दैछन् । हजार सिट क्षमताको हलमा चलचित्र हेर्न ३ जना पनि दर्शक नहुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हल सञ्चालक झिँगा धपाएर बस्न बाध्य छन् । आश गरेका चलचित्र समेत चलेका छैनन् । हलमा कर्मचारीलाई तलब दिन गाह्रो भैसकेको छ । झिँगा धपाएर बस्नुभन्दा बुधबारबाट हल नै बन्द गर्दैछु,’ उनले भने ।
‘प्रसाद’ फेम्ड निर्देशक निर्देशक दिनेश राउत राम्रो चलचित्रलाई दर्शकले सधैं साथ दिने बताउँछन् । माघ २४ गतेबाट प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र ‘सेल्फी किङ’ का निर्माता समेत रहेका उनले भने- ‘अहिले कुन चाहिँ चलचित्र चल्नुपर्ने जस्तो आएको छ र चल्नु ? चिसो त अघिल्लो वर्ष पनि थियो । चिसो मौसमका कारण दर्शक चलचित्र हेर्न हल नगएका होइनन् । चलचित्र नै राम्रो नआएर हो ।’
निर्देशक राउतको भनाईमा अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरी पनि सहमति जनाउँछन् । दर्शक मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी भए मात्र हल जाने उनको तर्क छ । ‘अहिले बनिरहेका ८० प्रतिशत चलचित्रले दर्शकको टाउको दुखाउँछ । म आफैंं प्रिमियरमा जाँदा उकुसमुकुस हुन्छु । कतिबेला निस्केर घर जाउँ जस्तो हुन्छ । दर्शकलाई झन् चलचित्र हेर्न कति गाह्रो हुन्छ होला,’ उनी सुनिए ।
अहिले दर्शकले ब्रान्ड बनिसकेका चलचित्रका सिरिज र टिमका फिल्म मात्र हेर्न थालेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ देखि नै कुरा गर्ने हो भने यो चलचित्रको सिरिजप्रति दर्शकको विश्वास थियो र चल्यो । त्यसपछि ‘जात्रै जात्रा’ र ‘कबड्डी ३’ आफैंमा राम्रा चलचित्र थिए र चले । दर्शकको हाम्रो टिममाथि विश्वास भएका कारण ‘छ माया छपक्कै’ चल्यो ।’
मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने चलचित्रलाई दर्शकले साथ नदिने उनको कथन छ । अहिले चलचित्र नचल्नुको कारण पनि उनी यही मान्छन् । चिसो मौसम कुनै कारण हुनसक्छ ? हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘बिहानी र रात्री सोजमा केही हदसम्म असर गर्छ तर दिवा सोजलाई गर्दैनन् । अहिले दिउँसो पनि हलमा दर्शक छैनन् । यसको कारण चलचित्र राम्रो नभएरै हो हुन् ।’
आश गरिएका चलचित्र समेत नचल्दा अहिले फिल्म निर्माण र प्रदर्शन गर्न लागेका निर्माताहरु नराम्रोसँग तर्सिएका छन् । गत वर्ष दशैंपछि कुनै नेपाली चलचित्र नचल्दा चलचित्र क्षेत्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । यो अवस्था यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ । गुणस्तर चलचित्रमा जोड नदिने हो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाँडै संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।